म कसरी इन्स्टाग्राम SEO ह्यान्डल गर्न सक्छु?
यस अल्ट्रा-लोकप्रिय अनलाइन प्लेटफर्म परिचय गर्न आवश्यक छैन, जहाँ प्रत्येक प्रयोगकर्ताले व्यावसायिक कार्यक्रम जस्तो महसुस गर्न सक्छ. यहाँ इन्स्टाग्राम आउँछ, दैनिक साझेदारी गरिने 50 लाख भन्दा बढी फोटोहरू. र इन्स्टाग्राममा भएका ग्राहकहरूका खडा दर्शकहरू विस्तारै रहन्छन्, किनकि अधिक र अधिक व्यक्तिहरूले यसको अनूठा प्रयोगकर्ता अनुभव, फोटोग्राफीको विषयसँग विशुद्ध रूपमा सम्बोधन गर्छन् र सफलतापूर्वक सर्वोत्तम सामाजिक लिङ्कहरूको शीर्ष तत्वहरू संयोजन गर्दछ।. यही कारणले ब्रान्ड प्राधिकरणलाई बढावा दिन, कार्बनिक ट्राफिक प्रवाह वृद्धि गर्न वा प्लेटफर्मको लागि कुनै अन्य डिजिटल मार्केटिङ अभियानको लागि इन्स्टाग्राम एसईओ को विचार कुनै नयाँ नतिजाबाट टाढा छ।.
तपाईंको ब्रान्ड नाम
को लागि बलियो जागरूकता बनाउनुहोस्, इन्स्टाग्रामले साथीहरूको लागि सजिलो प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ तस्विरहरू पारस्परिक रूपमा साझेदारी गर्न, उपलब्ध विभिन्न प्रभाव वा फिल्टरहरूसँग सम्पादनका लागि, साथसाथै प्रत्येक प्रयोगकर्ताको लागि लक्षित खोज अनुमति दिने ह्याशगगहरूसँग इम्बेडिंग गर्न तयार छ. केवल फोटोग्राफीमा कुनै पनि कुशलता यहाँ फेला पार्न सकिन्छ - selfy बाट केही पुरानो फिल्टरहरूसँग, अनलाइन फोटो स्टूडियोहरूमा।. यसको मतलब इन्स्टाग्राम मा एक सामाजिक खाता ले तपाईंको व्यवसाय व्यापक विज्ञापन अवसरहरुलाई अधिक व्यक्तिगत स्तर मा संभावित ग्राहकहरु लाई सम्बोधित गर्न सक्छ.
इन्स्टाग्राम मा कुनै पनि व्यक्तिगत रूप देखि ब्रांडेड अकाउंट रनिंग एक स्वाभाविक रूप देखि सरल कार्य हो. तथापि, तपाईंले निम्न कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नु अघि व्यापारमा डिलिङ्ग गर्नु अघि राख्नुपर्छ. सबैभन्दा पहिला, प्रत्येक दिनको लागि तपाईंको ब्रान्ड प्रतिनिधित्व गर्ने गुणस्तर छविहरू प्रकाशन गर्न यहाँ आवश्यक छैन. सेवाको आधारभूत अवधारणा यो छ कि अधिक प्राकृतिक रूप छविमा दिइएको छ, अझ बलियो प्रतिक्रिया यो अधिक प्राप्त गर्न को लागी. प्राय: एक आधिकारिक तरिकामा कार्य नगर्न, किनकि प्रयोगकर्ताहरू त्यसमा कहिल्यै आकर्षित हुँदैनन्. सबै भन्दा साधारण चीजहरू, दृश्य समाधानहरू मा सोच्ने जस्ता सोच्नु र त्यसमा, केवल आफ्नो नयाँ सिर्जना गरिएको प्रोफाईललाई प्रत्यक्ष व्यापारको साथ तपाईंको व्यवसाय वेबसाइटमा जडान गरी इम्बेड गर्न नबिर्सनुहोस्।.
प्रतियोगितामा स्वागत छ
इन्स्टाग्राममा फोटो प्रतियोगिता होल्डिंग तपाइँको स्थानीय अनलाइन उपस्थितिलाई अझ बलियो बनाउन सरल तरीका हो। हैशगहरू र उहाँका आफ्नै अनुयायीहरू वा साथीहरूद्वारा तपाईंको ब्रान्डलाई प्रवर्धन गर्दै. र प्रशंसकहरूको प्रगतिशील बढ्दो संख्याको लागि स्वस्थ प्रवृत्ति हो. हैशगहरूका लागि आवेदन गर्दा, म दर्शकहरूलाई मुख्य विवरणहरू केही हप्ता आउँदै गरेको घटनाको बारेमा थाहा पाउने सुझाव दिन्छु. तपाईंको प्रतियोगिता अधिक आकर्षक बनाउन को लागि, एक वास्तविक कार्य को ईंधनको लागि उचित इनाम प्रस्ताव मा दुश्मन नगर्नुहोस्. यसैले, तपाईं एक प्रतिशत खर्च बिना एक सुन्दर छोटा विज्ञापन प्राप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, जबकि तपाईं आफ्नो लक्षित दर्शकहरूको वास्तविक जीवन र प्राथमिकताहरू महसुस गर्न सक्नुहुन्छ.
अरु धेरै संलग्न छ, र जैविक ट्राफिक बढ्दै जान्छ
यहाँ केन्द्रीय अवधारणा यहाँ एसएसओ कीवर्ड र मेटा ट्यागहरू. सम्झनुहोस्, एक "Instagram एसईओ" एक शुद्ध उत्साह चाहिन्छ र रचनात्मकता सधैं आफ्नो मुख्य विषयहरू र प्रासंगिक अनुयायीहरू संग समावेश हुन आवश्यक छ. केही रोचक सामग्री पोष्ट र प्रतिक्रिया टिप्पणीहरूको लागि अनुसूची कायम राख्नका लागि मात्र पर्याप्त समय तिर्नुहोस्. चिन्ता गर्न आवश्यक छैन - मूल पाठ लेखहरू इन्स्टाग्राम SEO को लागि राम्रो गर्दै छन्, जस्तै सोशल मिडियाको अन्य पारंपरिक माध्यमहरू. तथापि, तथापि, कि इन्स्टाग्राम सम्झनाहरू साझेदारीको लागि एक स्थान हो, आधुनिक प्रवृत्तहरूसँग रमाईलो रहनुहोस्, र तस्विर योग्य योग्य उत्पादनहरू वा सेवाहरू Source .